Wasiirka hormurinta adeegga bulshada oo dhagax dhigtay iskuulka 21 October.
Dawlad Deegaanka Soomaali Galbeed oo Shidaalka Laga Soo Saaro Dhulkooda Ku Yeelanaya 50%.
Muqdisho oo maanta looga dhawaaqey Xarunta Cilmibaarista,DHaqanka iyo Nabadda.
Marwada 1’aad ee dalka Saynab Cabdi Macalim oo Hambalyo ku aadan 8 marso u dirtey hawenka Soomaaliyeed.
Marwada Madaxweynaha Dalka Zeynab Cabdi Macalin, ayaa Haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeeysay 8-da Maarso, oo ah “Maalinta Haweenka Adduunka”. Marwo, Seynab, ayaa haweenka Soomaaliyeed, ku tilmaamtay in ay yihiin laf-dhabarka dalka, ayna door wanaagsan kasoo cayaareen nabad-galyada. Magaladda Muqdishu, manta waxaa laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee Haweenka. Ugu danbayntii Marwada Madaxweynaha Dalka...
SHirkii madasha Qaran raggii isku magacaabey oo Muqdisho maanta ka furmey si rasmi ah.
Maanta ayaa la filayaa in Muqdisho uu ka furmo shirka madasha wada-tashiga Qaranka, taasoo isugu imaanayaan dhammaan hoggaamiyyaasha Soomaalida, waxaana go'aan looga gaarayaa xilliga ay dhacayso doorashada madaxnimo ee sannadkan 2016-ka. Shirkaan, ayaa waxay madaxdu uga doodayaan qodobbo dhawr ah, iyadoo la filayo inay go'aan ka gaaraan xilliga doorashadu dhacayso,...
Ganacsato Soomaaliyeed oo Goobahoodi Ganacsi Dab la Qabadsiiyey Dalkaasi South Africa.
Wararka ka imanaya dalka Koonfur Africa ayaa sheegaya in muwaadiniin Soomaaliyeed la dilay kaddib markii lagu gubay goobahooda ganacsiga. Falkan oo ay ku dhinteen muwaadiniin magacyadooda lagu kala sheegay Cali Maxamuud Cali, Cabdullaahi Cali Caymooy ayaa waxaa uu dhacay habeenkii Isniinta oo taariikh-da ku beegneyd 31-ka bishii ina dhaaftay ee...
Wafdigii kismaayo uuna horkacayey r/wasaare saacid oo guuldaro la soo laabtey.
Wafdigii uu horkacayey r/wasaare saacid ayaa muqdisho kusoo laabtey iyagoon wax heshiis iyo is afgarad ah aan laga gaarin arrimihii ay isku hayeen maamulka raaskamboodi ee uu hugaamiyo sh axmed madoobe. Wasiirka arrimaha gudaha oo la hadlayey warbaahinta ayaa sheegey in ay maamulka axmed madoobe isku afgaranwaayeen qodobo dastuurka ku...
Galmudug iyo Puntland oo beeniyey in dawladda dalka Itoobiya ay hehiis kala dhex dhigtey.
Maamullada Puntland iyo Galmudug ayaa beeniyeen in Dowladda Itoobiya ay soo dhex-dhigtay heshiis ku aaddan Dagaalladii dhawaan labadan maamul ku dhexmaray Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug. Wasiirka Amniga Maamulka Galmudug Cismaan Ciise Nuur , ayaa sheegtay inay Saraakiil ka socota Dowladda Itoobiya dhex-dhigeen Heshiis hordhac ah oo ku aaddan...
Ciidamada Africom ee Mareykanka oo Shaaciyey in Ka Hadalka Weerarada ay Ka Geystaan Gudaha Soomaaliya ay U Daayeen Daawladda Soomaaliya.
Taliska howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in ay sii xoojinayaan weerarrada duqeymaha ah ee ka dhanka ah Al-shabaab. Laakiin dhinaca kale taliska howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in ka hadalka khasaaraha duqeymaha ay ka geystaan Soomaaliya u daayeen dowladda Soomaaliya oo ay tahay in ay warbaahinta la wadaagto...
Madaxwayne Faroole “Lagama Yaabo In Aan ogolaano in Dalka Lagaliyo Maxmiyad”
shabakada Wararka Warso.com Madaxwayne Faroole ayaa waxyaabii uu kahadlay waxaa kamid ahaa Arinta dastuurka qabyada ah ansixintiisa,Roadmapka iyo Xaalada Ani ee deeganada Maamulka Puntlad sida uu yahay. Intaa kadib Madaxwayne Faroole ayaa kahadlay qaadicidii Ergada Puntlad Shirka Odayaasha Dhaqanka ee lagu soo Xulayay Ergada Ansixinta Dastuurka taas oo ay Puntlad...
Dawladda Federalka Soomaaliya oo sheegtey in ay ka hortageyso Fatahaadaha wabiyada.
Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Saalim Caliyow Ibroow ayaa sheegay in ay wax ka qabanayaan fatahaadda uu inta badan sameeyo Wabiga Shabeelle. Wuxuu sheegay arrintan in ay iskala shaqeyn doonaan Wasaaradaha maamul goboleedyada ee mataanaha la ah Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Xukuumadda Federaalka. Sidoo...
Askar Tababar loogu Soo Xirey Maagalada Kismaayo ee Xarunta kmg Maamulka Jubaland.
Ku dhawaad 150 askari oo katirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qeybtooda 43-aad ee jubbaland ayaa waxaa magaalada kismaayo loogu soo xiray tababar socoday mudo 15 cisho ah kaa oo lagu barayay xirfadda Shiishka iyo isticmaalka hubka culus. Munaasabaddii xirtaanka tababarka waxaa ka qebygalay sarkiil ka socotay howlgalka nabad ilaalinta midowga...
123...1,407Page 2 of 1,407